Hooyo Mareykan ah oo maxkamad ka codsatay in loo naxariisto ninkeeda oo ka dilay… – Hagaag.com
Hooyo Mareykan ah oo maxkamad ka codsatay in loo naxariisto ninkeeda oo ka dilay…
Posted on 13 Juunyo 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Hooyo Maraykan ah oo shan caruur ah uu ka dilay aabahood ayaa xeerbeegti dacwaddiisa qaadaysa ka codsatay in aysan dil ku xukumin. Amber Kyzer ayaa maxkamada ku taalla South Carolina u sheegtay in Tim Jones Jr “uusan wax naxariis ah tusin carruurta, balse carruurtiisu ay jeclaayeen”.
Ninkan 37 jir ah ayaa bishii May lagu helay in uu dilay carruurtaas walaalaha ah oo da’doodu u dhaxaysay hal ilaa siddeed sano jirro. Carruurtu ayuu ku laayay gurigiisa oo ku yaallay Lexington taariikhdu markay ahayd 28 Agoosto 2014.
Taasi waa dulqaadka hooyonimo.” Kyzer ayaa xeerbeegtida u sheegtay in inta badan nolosheeda ay ka soo horjeedday dilka la isku xukumo.
Kyzer ayaa intaas ku dartay in ay ixtiraami doonto go’aan kaste oo xeerbeegtidu gaarto. Waxaa loogu yeeray in ay markhaatigeeda ka hor caddayso qareennadii difaacayay.